Wax ka Ogow Makhaayadaha ugu Cajiibsan Caalamka!. | Shacabka Puntland	Monday, February 20th, 2017	Home
Wax ka Ogow Makhaayadaha ugu Cajiibsan Caalamka!.
Jan 10, 2017 - Post View: 4,890
Waxaa Jirta Qaabab badan oo Caalamka loo kala Ganacsado taasi waxaa sii in Qof walba uu ka helo qaab uu ku saleeyo Ganacsigiisa Halkaan waxaa idinkugusoo gudbinaynaa Makhaayadaha ugu Cajiibsan Caalamka!
1. Makhaayada Rootiga iyo Hubka waxay ku taal Beirut, Lebanon: Albaabka waxaa hor yaal jawaano Ciid laga buuxiyay oo dhufeys ah, shaqaalaha waxay ku labisan yihiin Dharka Milatariga, inta aad wax cuneyso waxaa sameecado cod dheer laguugu shidayaa Qoryo iyo madaafiic dhacaya!
2. Baar ku yaal magaalada Zhengzhou ee China waxay oggoshahay Dadka quruxda badan in ay soo galaan keliya waana bilaash wixi ay cunaan. Waxaa ugu dhegan Boor weyn: Haddii aad Qurux badan tahay soo gal ka dibna lacag la’aan ku cun waxaad rabto!
3. Makhaaxida Cusbitaalka oo ku taalay Latvia: Kabalyeeriyaasha waxay u labisan yihiin sidi Kalkaalisooyin, qofka Jaakad cad ayaa loo gelinayaa oo gacmaha ka xireysa, ka dibna cuntada uu dalbado shaqaalaha Makhaayada oo Kalkaaliso u labisan ayaa siinaya!
4. Hudheel cunto oo ku yaal Sacuudiga waxay ganaaxdaa lacag dhan 50 Dollar qofki aan dhameysan cuntada uu dalbaday. Qof kasta waxa uu ku qasban yahay in uu saxanka ka dhameeyo waxa uu dalbaday hadii kale ganaax lacageed ayaa laga rabaa.
5. Casho Cirka ah, waa Makhaayado ku yaal meelo badan oo Aduunka ah: Montreal, Dubai, Frankfurt, Paris, Malaysia, Belgium iyo kuwa kale. dadka marka ay fariistaan ka dib Wiish weyn ayaa ilaa 50 mitir kor u haynaya Miis, kuraas iyo saqaf dusha ah oo isku sameysan, Suun ayaa lagula xiraa Kursiga qof kasta, halkaa hawada sare ah ayaadna ku casheynaysaa!
6. Makhaayada Wadne Istaag: Waxay ku taal Las Vegas, USA. Dadka buuran oo miisaankoodu ka badan yahay 150 kiilo Bilaash ayay ku cunayaan.
7. Baar ku yaal France waxay ku dallacdaa todoba Dollar halki koob oo Coffee ah macaamiisha qeylada badan oo aan si hoose u hadli karin, halka ay ku dallacdo hal Dollar keliya kuwa tartiib u hadla ama u sheekeysta. Saddex Soomaali ah oo maalin gashay balaayaa ka raacday markey fariisteen ayay Fadhi ku dirir horay ka bilaabeen ileen sida caadiga ahna si hoose uma wada hadli karin!
8. Makhayad ku taal Philipines oo la yiraahdo Tacsiyabo, waxaa loogu talagalay dadka aadka u careysan. Waxaad derbiga la dhaceysaa Saxamo badan oo Dhoob ama Dhalo ka sameysan, waxay ku leeyihiin mar kasta oo aad saxamo ama maacuun badan ja-jabiso xanaaqa ayaa kaa yaraanaya!! Waxaa lagaa rabaa in aad kor u qeyliso markaad ja-jabinayso! Gidaarka aad la dhaceyso waxaa ku qoran waxyaabaha kaa xanaajiyay, waxaa ka mid ah qof aad kala harteen! Madaxweyne madax xanuun kugu riday, jeeb marnaan kugu daahday, iwm.
La soco qeybta labaad….
W/Q: Farah Cawaash.